Babanga amanzi nezinkomo eNcwadi | News24
Babanga amanzi nezinkomo eNcwadi
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaUNks Phumla Luthuli ekhombisa amanzi aphuzwa umphakathi.
UMPHAKATHI wasendaweni yaseNcwadi ka-ward 39 ngaphansi komasipala uMsunduzi uthi uzibona ingekho into abayenzelwayo endaweni yabo eyintuthuko.
Lo mphakathi uthi into ekuthiwa intuthuko uyizwa ngendaba njengoba kungekho nokukodwa asebeke benzelwa kona.
Phakathi kwezinto abakhala ngazo umgwaqo, amanzi kanye nezindlu zomxhaso abangenazo.
Bathi uma ngabe bephuma edolobheni baphoqeleka ukuba bahambe ibanga elingaphezu kuka-5km ngoba itekisi ibashiya kude ngoba ayikwazi ukungena kule ndawo ngenxa yobubi bomgwaqo.Izindlu zomxhaso zona bathi balokhu bethenjiswa njalo ukuthi bazokwakhelwa kodwa kuze kube imanje azikaze zakhiwe. Amanzi bawathola kumaloli athwala amanzi kanti kwezinye izindawo amaloli awafiki nhlobo.
Endawemi yaseMdutshane bathi uma ngabe izulu kade lina izingane ezifunda eMdutshane Primary zize ziphoqeleke ukuthi zingayi esikoleni ngoba umgwaqo uvele uphenduke ube udaka kungahambeki.
Umphakathi wakule ndawo uphila ngamanzi owathola elolini elithutha amanzi nabathi alifiki kwezinye izindawo kanti libuye leqise izinsuku libuye lingafiki.
Endaweni yaseNdlotsheni khona eNcwadi umphakathi ubanga amanzi nezinkomo eziphethwini kanti bathi sebesaba nokuthi bazogcina sebenezifo ezinkulu ezizobagulisa ngenxa yamanzi abawaphuzayo.
Elinye ilunga lomphakathi elikhulume ne-Echo ngesikhathi ivakashele le ndawo lithe lona laze laphoqeleka ukuba lisuke endaweni yaseNdlotsheni ngenxa yamanzi aphuzwayo kulendawo waze wayohlala kwelinye ikhaya lakhe eliseMdutshane khona eNcwadi.
“Nalapho ngihlala khona angisho ukuthi kulungile kodwa kungcono kunalapho kade ngihlala khona. Ubuke uthi uyokha amanzi ufike izinkomo ziwaxova kuphoqeleke ukuba uzilinde ziqede bese kuba ima nawe ukha khona lapho amanzi ozowaphuza.
“Okubi kakhulu ukuthi nalawomanzi eziphethu besingawazi nokuthi avelaphi kodwa besiwaphuza ngoba beyingekho into esizoyenza. Bekuthi uma ngabe amanzi esewudaka kakhulu esiphethwini bese sihambe siyofuna esinye isiphethu esizokha kusona amanzi,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi elihlala eMdutshane uNks Phumla Luthuli uthe uma ngabe amaloli athwala amanzi engafikanga amanye amalunga omphakathi ayaphoqeleka ukuba ayocela amanzi kuleyomizi enompompi.
LUYAQHUBEKA EKHASINI LESI-2
“Nabompompi labo abantu bazifakele bona bedonsa eziphethwini eziseduze kwabo ngoba bengenawo amanzi.
Ayikho nje into eyintuthuko esiyenzelwayo kule ndawo kodwa ekugcineni kuthiwa kumele sivote. Sekuphele iminyaka emingaki nje sivota kodwa akukho ngisho intuthuko encane endaweni yethu.
“Sikhathele manje sekwanele. Akekho nje osinakayo thina nonendaba nokuthi siphila kanjani sivele salahlwa nje kanjalo. Esikhathini samanje ubani nje umuntu osakha amanzi esiphethwini ewabanga nezinkomo ?” kubeka yena.
Umgwaqo ongenela kulendawo wonke uwubhuqu kanti uma ngabe usungene ngaphakathi kule ndawo kunezindawo ezinomgwaqo onemigodi izimoto ezingakwazi ukuhamba kuyona nokuyikona okugcina sekuphoqa amatekisini ukuba ashiye amalunga omphakatthi kude.
Ngesikhathi i-Echo ihambele kule nadwo amaye amalunga omphakathi asebenzela kazibambele abezama ukuphesha umgwaqo ngenhlabathi abebeyikha eceleni kwawo umngwaqo.
Elinye ilunga lomphakathi lithe : “Imigwaqo eminingi umphakathi iwona owulungisile ngoba besekukubi kungasahambeki. Sizamile nathi ngendlela ebesingakwazi ngayo sabeka amatshe kodwa usabheda namanje. Ikhansela lethu nalo alisinakile nje ngoba ngisho izinombolo esanikezwa zona ukuthi sizishayele uma ngabe sinezikhalazo zomphakathi zikhala zingabanjwa asisazi nathi ukuthi kumele senze njani.”
Ikhansela lakule ndawo uNkk Thandiwe Madondo uyalele intatheli ye-Echo ukuthi ayithintane neMeya yomasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo ngalolu daba ngoba iyona elwaziyo. Imizamo yokuthola uMnu Njilo ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belungabanjwa kanti nomyalezo athunyelelwe wona akawuphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.